Sida loo abuuro a Windows Recovery CD / digsi
> Resource > Windows > Windows Recovery CD / digsi: Xalka kaamil ah in Windows
Maxaad u baahan tahay Windows kabashada CD / disk?
Inta badan dadka isticmaala computer la kulanto laga yaabaa in this: screen buluug, shaashadda madow, shil boot, shil loading, iwm Dad badan ayaa laga yaabaa in aadan aqoon sida loo xaliyo dhibaatooyinkan, ama ku qaataan boqolaal doolar si dib nidaamka ama adeegga . Si dhaqso ah oo hufan hagaajin intaas oo dhammu waxay dhibaatooyin kala duwan, kaliya aad u baahan tahay ka soo kabashada CD Windows ama disk. Markaas waxaad tahay lacag la'aan nooc oo ka mid ah dhibkooda PC.
Maxaa ka soo kabashada Windows CD / disk samayn karaa?
Hel ka soo kabashada CD Windows: Wondershare LiveBoot Downlaods CD / USB
Waxay kaa caawin kartaa si uu u xaliyo oo dhan arrimaha Windows hoos ku qoran:
Boot Shil: Marka aad bilowdo kombiyuutarka, mar kasta waxay ku bidbidayaan la shaashad madow. Marnaba ma ay awoodaan in ay u helaan in ay birta ku loading Windows. Waxaa laga yaabaa inaad wada dhawrtaan oo shaashadda madow leh qeybda dulqabo ama ka dib markii fariimaha baadi:
• boot disk adag failure
• miiska xijaab aan saxnayn
• nidaamka qalliinka lagama helin
• nidaamka Error loading hawlgalka
• nidaamka qalliinka oo maqan
• screen Black macluumaad lahayn
• NTLDR maqan yahay ama ku kharribeen
• Ntoskrnl.exe maqan yahay
• Ntdetect.com maqan yahay
• BOOTMGR maqan yahay ama ku kharribeen
• NTFS.SYS maqan yahay
• Hal.dll maqan yahay
Loading Shil: Marka aad computer ku bilaaban, waxaa had iyo jeer bidbidayaan ama fariisiyo ee Windows bar loading ama Windows Welcome shaashadda. Waxaad ka heli kartaa iyada oo bar loading ah, si kastaba ha ahaatee marnaba ma ay awoodaan in ay galaan Windows ah. Waxaa laga yaabaa inaad wada dhawrtaan oo lagu keydsho screen, rebooting screen si joogta ah, buluug ama madow shaashadda.
Random Shil: Your Windows bidbidayaan oo dhan lama filaan ah. Ka dib markii rebooting kombiyuutarka, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho galay Windows mararka qaarkood. Si kastaba ha ahaatee waxaa ku hayaa shil aan kala sooc lahayn. Waxaa laga yaabaa inaad wada dhawrtaan oo screen buluug ama madow shaashadda. Calaamadda ugu this gaar ah oo kala duwan samaynta ka xal kale waa in aad laga yaabo inay galaan Windows mararka qaarkood.
Windows kaabta & Soo Celinta: Haddii aad taageeray Windows ama computer aad, waxa ay kaa caawin kartaa in la soo celiyo Windows aad halkan. Sidoo kale, waxa ay kaa caawin karaan in ay gurmad aad Windows.
Iibso Boot LiveBoot Wondershare 2012 ($ 59.95)
Sida loo sameeyo a Windows XP Boot digsi